अभिभावकहरुले बालबालिकालाई सीकाउनै पर्ने कुरा के के हुन् ? जान्नुहोस - ज्ञानविज्ञान
चम्चाले खाना खाए पनि बालबालिकालाई खाना खानु अगाडि र पछाडि हात धुन लगाउनुपर्छ । यसले झाडापखाला, खानाबाट हुने संक्रमण र हेपाटाइटिस हुने खतरा न्यून गर्छ ।
स्वस्थ र सरसफाइका लागि पनि खाना खुवाएपछि उनीहरुको हात धोइदिनुपर्छ ।
खाना खाएपछि राम्रोसँग मुख कुल्ला गर्ने बानी आजैबाट बसाल्नुहोस् र आफ्ना बच्चाहरुलाई पनि सिकाउनुहोस् । कुल्ला गर्दा दाँतको गिजामा अल्झिएका खानाका टुक्राहरुलाई फाल्ने र मुख गन्हाउने समस्याबाट बच्न सकिन्छ ।
नियमित प्रार्थना र पुस्तादेखि चलेको संस्कार बालबालिकालाई सिकाउँदा उनीहरुमा स्वस्थ जीवनशैलीको विकास हुन्छ ।
बिहान उठ्नेबित्तिकै आआफ्नो धर्मअनुसार मन्त्र, जप, ध्यान, पाठ गर्नाले स्मरणशक्ति बढ्छ, मुटु स्वस्थ हुन्छ र डिप्रेसनबाट जोगाउँछ । प्रार्थना गर्दा सकारात्मक सोच र आध्यात्मिक ज्ञानको ज्योति आउँछ ।
आयुर्वेदमा वर्णन गरिएअनुसार आफ्नो दैनिक कार्यमा संलग्न हुनुभन्दा अगाडि केही घन्टा सबेरै हिँड्नाले दिनभर सक्रिय र खुसी रहन सकिन्छ । समयमै सुत्नाले र बिहान उठेर व्यायाम गर्नाले जीवन नै उत्पादनशील हुन्छ ।
सबेरै उठ्ने व्यक्तिमा डिप्रेसनको खतरा कम हुन्छ । त्यसैले अभिभावकहरुले आफ्ना बालबालिकालाई सानैदेखि बिहान सबेरै उठ्ने बानी बसाउनुपर्छ ।
पलेँटी कसेर खाँदा पाचन प्रक्रियालाई सहयोग गर्नुको अतिरिक्त तौलसमेत घट्छ । साथै यो आसनमा खाना खाँदा बस्ने ढंगमा सुधार ल्याउने, घुँडा र जोर्नीको समस्यालाई पनि समाधान गर्छ ।
यो आसनले रक्त प्रवाहमा पनि सुधार ल्याउँने भएकाले बालबालिकालाई पनि भुइँमा पलेँटी कसेर खाने बानी लागाउनु एकदमै जरुरी हुन्छ ।
आयुर्वेदमा उल्लेख भए अनुसार साँझ पर्ने÷नपर्ने बेलामा खाएको खाना प्रकृतिको नियम र चक्रअनुसार हुन्छ । शरीरलाई पनि निकै हितकर हुन्छ । त्यसैले आफ्ना बालबालिकालाई साँझ ८ बजे अगाडि नै खाना खुवाउने बानी बसालौँ ।
यो समयमा खाना खाँदा मोटोपनबाट जोगिन्छ, पाचनको समस्या घट्छ, निद्रा बढाउँछ र अर्को दिन बिहान उठ्दा फुर्तिलो भइन्छ ।
तातो पानीले नुहाउँदा तालुमा पिएचको मात्रा बढाउँछ र कपाल झर्छ । यसले कपाललाई भद्दा र कमजोर तथा पातलो बनाउँछ ।
तर, चिसो पानीले तपार्इंको शरीर र तालुको तापक्रमलाई दिगो बनाउनुका साथै कपाल झर्नबाट रोक्छ । तसर्थ बच्चाहरुलाई पनि सानैदेखि सकभर तातो पानीले नुहाउने बानी नबसाल्नुहोस् ।
Topics #अभिभावक #बालबालिका #सीकाउनै पर्ने कुरा
Don't Miss it स्वस्थ्य रहनका लागि यी खानेकुराहरु खालि पेटमा भुलेर पनि नखानु होस्
Up Next एक्सरसाइज गर्नु अघि यी खानेकुरा खानुहोस्
मिर्गौलाको पत्थरी के हो ? लक्षणहरु, खान हुने र नहुने कुराहरु र यसको उपचार
मिर्गौलाको मुख्य काम रगतलाई फिल्टर गरी सफा गर्ने र विकार वस्तुलाई पिसाबबाट बाहिर फ्याँक्ने हो । यो क्रममा यदि फिल्टर…